အွန်စောတို့ဌာနေ: Welcoming from Yesan
"အွန်စောဆီလာလည်ကြတဲ့ မိတ်သဟာ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရင်း၊ ခင်မင်ရင်းနီးနွေးထွေးစွာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ နောင်လည်းမကြာမကြာလာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။ ။"
Download Myanmar font" "
ဤနေရာမှ လင့်များ "ဆက်လက်ခရီးဆက်နိုင်ဘို့"သို့ ပို့ထားပါတယ်။
Welcoming from Yesan
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရယ်ဆန်မြို့လေးလာလည်လို့ (ငါးရက်တစ်ဈေး) ဈေးနေ့နဲ့လဲတိုက်ဆိုင်နေတာနဲ့ ဈေးလည်လိုက်ပို့ရင်း စိတ်ဝင်စားတာလေးတွေ ရိုက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ နယ်မြို့လေးဆိုတော့လည်း တစ်မျိုး စိတ်ဝင်စရားလေးတွေ။ အဲဒီနေ့က တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ ရယ်ဆန်ပန်းသီးခင်းတွေ လေတိုက်ခံထားရလို့ လေချွေပန်းသီးတွေ ဈေးထဲမှာ လျှော့ဈေးနဲ့ အပြိုင်ရောင်းနေကြတာ တအားပဲ။ ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အောက်မှာ သာကြည့်လိုက်တော့။
ဒါကတော့ ကျောင်းဝင်းအတွင်းက စိုက်ခင်းလေးတွေပါ။ တစ်ခြားအခင်းတော့သိပ်မရှိပါဘူး။ သခွားခင်းနဲ့ ပန်းအလှစိုက်ထားတာလေးတွေပါ။ ဥယျာဉ်ခြံဌာနက သစ်ခွခြံကို အပြင်ကနေ ရိုက်ခဲ့ပေမဲ့ မှန်ခြံဖြစ်နေတော့ ၀င်လို့ကလည်းမရ (သော့ပိတ်ထားတော့) ရိုက်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ စတော်ဘယ်ရီခြံလေးတော့ ပါသေးတယ်။ အိုတွေနဲ့စိုက်ထားတာ။
ဒါက ပင်အိုပု (ဘွန်စိုင်း) လုပ်ထားတာလေးတွေ။ ဒါက ဟော်လန်ပန်း။
ဒါက အဆောင်ဘေးက ရေကူးကန်လေးပါ။
ဒါကတော့ ခေါက်ဆွဲစက်တဲ့လေ။ ခေါက်ဆွဲတွေ လှမ်းထားတာ။ တို့များ မုံရွာကြာဇံစက်လည်း ဒီလိုပါပဲ ကြာဇံတွေလှမ်းထားတာ သူတို့ထက်တောင်များပါတယ်။
Posted by Korea-Myanmar Mutual Benefit at 11:11 PM
Labels: Korea's Scenery
ကိုရီးယားရောက် မြန်မာ ဘလောဂါများ
ကိုရီးယားရောက်မြန်မာဘလော့ဂါများ ကိုရီးယား-မြန်မာ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရိပ်မွန်။ ဓမ္မဒူတကျောင်းတော် (ကိုရီးယား)။ စိတ္တသုခမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း။ မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်။ ပုံရိပ်(IMAGE)။ မိဘကျေးဇူး။ ကျေးဇူးတော်။ ဒါနမေတ္တာ။ ဟန်းဂုရွာ။ ဒုတိယစာမျက်နှာ။ သောကကင်းလွတ်နယ်မြေ။ မမရွှေရဲ့မှတ်စု။ မြန်မာ-ကိုရီးယားသူ။ ၀င်းကိုကိုစိုး။ မြန်မာကျောင်းသားများအသင်း။ အဖြူရောင်မေတ္တာလူငယ်များ။ အဖြူရောင်သူငယ်ချင်းများ။ ကိုဝင်းလတ်။ ကိုအောင်မျိုးသူ။ ကိုအောင်ကျော်ဖြိုး။ ဝေနွယ်နှင်းစိုး။ သဲသဲဝိုင်းချစ်။
ရေးခဲ့သမျှလေးတွေပါ။ About this blog (1) Advertisement (2) Agriculture (2) Class Reocrd (2) Excellent Korean (1) Excussion (13) Factory (2) General (5) Korea's Scenery (3) Korean Art (1) Korean Culture (10) Korean Food (3) Meeting (6) Mountain (1) Myanmar Font (1) News (1) Photo Gallery (7) Poem (2) Scholarship (4) Video (13)
တစ်ချိန်တုန်းကခေတ်မီမြန်မာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) ၊ ၁၉၅၇။
မြန်မာဝီကီပိဒိယ (Myanmar Wikipedia)
လာလည်သူပေါင်း (total visitors)
(이승철 - 사랑 참 어렵다 / Lee Seung Chul - Love is so difficult)
Korean Actresses - The best free videos are right here
လိပ်စာထားခဲ့ပါက ပို့ပေးပါမယ်။(Enter your email address:)
Free Myanmar Mp3 download, Myanmar Music, Myanmar Song Shared via AddThis
@ NIIED Application form (2009)။
@ Zawgyi Font Download။
@ Myanmar E-books။
@ English-Myanmar Dictionary။
@ Studying Abroad from Myanmar Training (စင်္ကာပူ၊ သြစတြေသျှ၊ မလေးရှား၊ အင်္ဂလန်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ)။
@ ဘဘော့စတင်လုပ်လိုသူများအတွက် (၁)။
@ ဘလော့စတင်လုပ်လိုသူများအတွက် (၂)။
@ Study Abroad Information for Myanmar Students
"ပြည်တော်ဦး" ကိုရီးယား-မြန်မာ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရိပ်မွန်
Free domain (co.nr)
The Blogger Guide.
မြန်မာစာ မြန်မာစကား (စကားပုံနှင့် စာလုံ့းပေါင်းသတ်ပုံ)
အဖြူရောင်နတ်သမီး (ယုဇနသီချင်း နားဆင်လိုလျှင်)
IT Reshare Site ( နည်းပညာဖြန့်ဝေတဲ့နေရာလေးတစ်ခု)
KP3 မိသားစု (ဘလော့နည်းပညာ စုံလင်စွာ)
ဒီဇင်ဘာနှင်း (ကာပြားမလေးရဲ့ ခံစားချက်များ)
စိမ်းပြာမြေ (သုတစုံ၊ ရဿစုံ)
မောင်ကျော်စွာငြိမ်း (blog technology)
ယူအေအီး၊ ဒူဘိုင်း မှ ဓမ္မရေဒီယို
ညီနေမင်း (လိုတရ ဘလော့ကြီးဗျို့)
Myanmarelottery (ထီပေါက်စဉ်)
ယုယ နွေးထွေး ( မြန်မာ ဘလော့ စုစည်းရာ)
ထူးဆန်းတာလေးတွေ (Believe or not)
ခေတ်လူငယ်။ (သတင်းစုံ၊ ကဏ္ဍစုံ၊ မြန်မာငွေဈေး)
ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ (၁၁)သုတ်၊ ပဌာန်း၊မေတ္တာပို့
အလင်းစေတမန်မှ ၀က်ဆိုက်များ။ (လိုရာ အကုန်နီးပါးဖတ်နိုင်၊ ကြည့်နိုင်ပါသည်)
သလ္လာဝတီ (ကဗျာကောင်းကောင်း၊ စာအုပ်စုံဖတ်လိုလျှင်)
မိုးအိမ့်ဖြူ (ဖတ်စရာနှင့် ဘလော့နည်းပညာ)
ပန်းစကား။ မြန်မာ ခေတ်ဟောင်း၊ ခေတ်ပေါ်သီချင်းများ
Music Video, Myanmar Karaoke
ဂျေဂျူဝိုင် (ဘာသာရေး၊ ကဗျာ)။
ဂျာမုန်းဒန် (ကချင်ဘာသာနှင့် အစားအစာ)။
စိတ်ကူးရသလို စကားလေးတွေ ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ (left your comments)
개인 정보 (Personal Information)
Korea-Myanmar Mutual Benefit
Me, I am Myanmar, I created it with the intention of the benefits of both nations. I would express Korea's excellence as much as I reach!
ရေးခဲ့ဖူးသမျှ 블로그 아카이브 (Blog Archive)
Pilgrims to the Holy Land (Daegu, In Korea)
If You Want to Attend at Korean University?
DNA Cloning and Polyacrilamide Gel Electrophoresis...
New Members Arriving KNU
관심있는 사용자 (Interested users)
ဒေါက်တာညီကို အားနာလို့ အနားပေးလိုက်ပါပြီ။